တစ် ဦး က Biostimulant စက်ရုံ၌အဘယ်သို့ပြုသနည်း - Potatoes News
စက်ရုံအတွင်း biostimulant ဘာလုပ်သလဲ။
Biostimulants ကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဘယ်လိုလဲ?
နောက်ဆုံး၌ သတင်းလွှာ abiotic အချက်များ (အပူနှင့်မိုးခေါင်ခြင်းအပါအ ၀ င်) နှင့်၎င်းတို့သည်အပင်များတွင်စိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောပြခဲ့သည်။
လာမည့်နှစ်များအတွင်းစိုက်ပျိုးနိုင်သည့်လယ်သမားများသည်၎င်းတို့၏ပိုက်ဆံအိတ်များတွင်ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုတိုး။ ခံစားရလိမ့်မည်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဘဏ္damageာရေးပျက်စီးမှုသည် ၂၀၅၀ တွင်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ၏ ၅၀% ကျော်အထိရှိနိုင်သည်။ WUR မှသုတေသီဒါနန်ဗရပ်စ်ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ - NPPL webinar '' ရာသီဥတု လိုက်လျောညီထွေ : အရမ်းခြောက်သွေ့လွန်းစိုစွတ်သောနှင့်ဆက်ဆံရာတွင် '' .
အပင်များသည်ပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများ၏ဖိစီးမှုနှင့်အစဉ်မပြတ်လိုက်လျောညီထွေရှိနေသည် သို့သော်စိတ်ဖိစီးမှုသည်အလွန်အမင်းသို့မဟုတ်ကြာရှည်စွာဖြစ်လျှင်အပင်များ၏စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ခံနိုင်သည့်ယန္တရားများသည်ဤအစွန်းရောက်အခြေအနေများအားသဘာဝကျကျဖြေရှင်းနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ဤသည်သိသိသာသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။ အပူနှင့်မိုးခေါင်မှုကာလများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကြာကြာနှင့်ပိုမိုပြင်းထန်လာပြီးရုတ်တရက်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Syngenta သည် biostimulant Quantis ကို အသုံးပြု၍ ယူကေရှိအာလူးတွင်အကြီးစားကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
"အပူချိန် ၂၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထက်ရှိသောကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှု ၃၀ တွင်တစ်နေ့လျှင်လေးနာရီကျော်ဖြင့် Quantis အထွက်နှုန်းသည်ပျမ်းမျှအားဖြင့် ၂.၂ t / ဟက်တာနှုန်းပိုများသည်။ မှတ်သားစရာမှာအထွက်နှုန်းနှင့်ဥအရွယ်အစားအကြီးမြတ်ဆုံးတုံ့ပြန်မှုသည်အပူချိန်အမြင့်ဆုံးရာသီများနှင့်အခြေအနေများတွင်ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ”
Syngenta UK မှနည်းပညာမန်နေဂျာဒေးဗစ်ကင်းကပြောကြားသည်။
ရလဒ်အဥ၏နံပါတ်နှင့်အရွယ်အစားနှစ် ဦး စလုံးအတွက်အထွက်နှုန်းလျှော့ချအဖြစ်အရည်အသွေးကိုက်ညီမှုဖြစ်နိုင်သည်။
ယခုနှစ်တွင် Syngenta သည် Quantis ၏ထပ်ဆောင်းတန်ဖိုးကိုရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရန်စိုက်ပျိုးသူများနှင့် HAS Den Bosch နှင့်အတူနယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အကြီးစားလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကိုစတင်ခဲ့သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်လား
Quantis ၏ osmo ကာကွယ်သည့်လုပ်ဆောင်မှုသည်အဘယ်နည်း။
အပူနှင့်မိုးခေါင်မှုကြောင့်ဆဲလ်များရေကုန်သွားသည်နှင့်ချက်ချင်းပင်ထိရောက်မှုနည်းပြီးစိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်ကိုခံနိုင်ရည်နည်းသည်။ Quantis ၏ osmo-protective function သည်ဆဲလ်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိပလာစမာအမြှေးပါးကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။ ဤသည် turgor ဖိအား (ဆဲလ်အတွင်းရှိရေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောဆဲလ်အတွင်းရှိဖိအား) ဆဲလ်ကိုထိရောက်စွာလည်ပတ်ဆက်လက်ခွင့်ပြု, လမ်းကြောင်းအပေါ်ဆက်လက်ရှိနေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
ခိုင်လုံသောအကြံဥာဏ်များနှင့်ခိုင်လုံသောအခြေပြုအကြံဥာဏ်များဖြင့်သာ Quantis ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်မည်ကိုပုံဖော်နိုင်သည်။ သို့မှသာစိုက်ပျိုးသူများအတွက်မှန်ကန်သောအသုံးချမှုအကြံဥာဏ်သည်ပုံဖော်နိုင်သည်။
စက်ရုံအတွင်းရှိ Biostimulant ဘာလုပ်သနည်း။
/ ဇီဝ /
Tags: abiotic အချက်များadsရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအပူစိတ်ဖိစီးမှုQuantisSyngenta
အာလူးအထွက်နှုန်းကိုထိန်းသိမ်းရန် - ယခုအခါရေသွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း
ဇူလိုင်လ 1, 2021
အမျိုးအနွယ်ကိုအာလူးအတွက် slurry ထိထိရောက်ရောက်
Greenvale သည်အစားအစာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုတိုက်ထုတ်ရန် FareShare ကိုပြုလုပ်သည်